शारदा पाण्डेको काठमाडौंमा १७ करोडको घर ! - National News
शारदा पाण्डेको काठमाडौंमा १७ करोडको घर !
काठमाडौं। ‘अघोरी बाबा’ का रूपमा चर्चित विजय केसीकी श्रीमती शारदा पाण्डेले आफूले कुनै लोभलालचमा लागेर बाबासँग बिहे नगरेको बताएकी छिन् ।
आफूसँग अमेरिकाको ग्रिनकार्डसमेत रहेको बताउने पाण्डेले अमेरिकामा मासिक १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउने जागिर छोडेर बाबासँग बिहे गर्न नेपाल आएको बताइन् । काठमाडौंमा आफ्नो १७ करोड रूपैयाँ हाराहारीको घर सम्पत्ति रहेको भन्दै उनले आफूलाई सम्पत्तिको लोभ नभएको पनि दाबी गरिन् ।
सांसारिक लोभ र मोहबाट दिक्दारी भएर बाबासँग बिहे गर्न पुगेको उनको भनाइ छ ।
पाण्डेमाथि चितवनकी एक युवतीलाई ठ’गेको आ’रो’प छ । उनी अहिले प्रहरी हि रा सतमा छिन् । आफ्नै पूर्व श्रीमान् गोविन्द अधिकारीलाई दाइ हो भन्दै चिनाएर बिहे गराएको र बिहेपछि दाइले अमेरिका लैजाने कथा बुनेको अभियोग पाण्डेमाथि छ । पाण्डेले आफूसँग रकम असुल गरेको भन्दै ती युवतीले प्रहरीमा उ’जुरी गरेकी थिइन् ।
सोही उजुरीका आधारमा गत मंगलबार महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले प’क्रा’उ गरेको थियो । उनीमाथि प्रहरीले ठ’गी मु’द्दामा अदातलबाट तीन दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाल पाण्डे बौद्ध प्रहरीको थु’नामा छिन् ।
यौन धन्दा : मोबाइलबाटै मोलमोलाई
हिमानीसँग कुराकानी र ज्ञानेन्द्रसँग मिटिङ गर्छन् पारस’
अष्ट्रेलिया पढ्न गएकि श्रीमतिले नेपाल आएर मानसिक तनाब दिएपछि आ’त्मह’त्या
नेकपाको चौँथो जित, समाजवादी पार्टीले पनि खोल्यो खाता, कांग्रेसको खाता खुलेन
Epidemic expert says Singapore has the best systems in the world to control Covid-19 outbreak
February 22, 2020 Lishyarini Sivarajah